तपाईंको भूतपूर्वको साथ फिर्ता जानुहोस्: हो वा होईन? फाइदा र नोक्सानहरू पत्ता लगाउनुहोस् | स्टाइलिश पुरुषहरू
तपाईंको भूतपूर्वको साथ फिर्ता जानुहोस्
जर्मन पोर्टिलो | | जोडी र सेक्स
हामी सबैको एक पार्टनर छ जसको सम्बन्ध ब्रेकअपमा समाप्त भएको छ र यसले काम गरेको छैन। यो अवस्था मा, आफ्नो भूतपूर्वको साथ फिर्ता प्राप्त एक ब्रेकअप को संदर्भ र तपाईंको व्यक्तित्व को आधारमा एक राम्रो विचार हुन सक्छ। केहि रोमान्टिक सम्बन्धहरू दोस्रो राउन्डमा आश्चर्य कार्य गर्दछन्, तर अरूहरू पहिले अन्त्य भन्दा खराब अवस्थाबाट गुज्रन्छन्।
यसैले हामी तपाईलाई विज्ञान के भन्छ भन्ने कुरा बताउन जाँदैछ, तपाईको भूतपूर्वको साथ फिर्ता लिनका फाइदाहरु र बेफाइदाहरु।
1 तपाईंको भूतपूर्वको साथ फिर्ता पाउने फाइदाहरू
2 तपाईंको भूतपूर्वको साथ फिर्ता हुने फाइदाहरू
तपाईंको भूतपूर्वको साथ फिर्ता पाउने फाइदाहरू
केहि विशेषज्ञहरु वर्तमान स्थिति मा तपाइँको पूर्व पार्टनर संग फिर्ता प्राप्त गर्न को फाइदा अन्वेषण गरेका छन्। यदि तिनीहरू मध्ये एक हुन जसले फेरि प्रयास गर्न उद्यम गर्छन्, यो किनभने तिनीहरू खुशी थिए। जब सम्म यो एक बिरामी, जुनूनी सम्बन्ध हो जहाँ तपाईं निरन्तर लडिरहनु भएको छ र फिर्ता आउँदै हुनुहुन्छ, यो किनभने त्यहाँ एक विषाक्त सम्बन्ध छ। जे होस्, यदि सम्बन्ध धेरै सकारात्मक भएको छ र प्रेम र समझ छ, त्यहाँ दोस्रो पटक हुन सक्छ। यद्यपि, त्यहाँ तेस्रो मौका नहुन सक्छ।
यदि उनीहरूले सम्बन्ध पुन: स्थापना गर्ने निर्णय गरे, तिनीहरू एक अर्काको मनपर्दो खोजीको विशिष्ट प्रक्रियामा जानु हुँदैन, चाहे ओछ्यानमा होस् वा उनीहरूको दैनिक जीवन, यौनको बाहिर। होईन, अब उप्रान्त तपाइँको मनपर्ने रेस्टुरेन्ट वा के उसले तपाइँलाई घृणा गर्दछ भनेर अनुमान गर्नुपर्दैन। तपाईंले दोस्रो राउन्डको पहिलो वार्षिकोत्सव उपहार छुटाउनु हुने छैन। अब, यी मुख्य प्रश्नहरू तपाईंको फिर्ता जानु अघि सोध्नु लायक छ। तपाईको साथ पछाडि जानु विज्ञानको आधारमा बढी गहन हुन सक्छ। जो व्यक्तिले यो अवस्था अनुभव गरेका छन् उनीहरूले भन्छन कि यो धेरै बढी रोमान्टिक र यौन तीव्र छ। यो सामान्यतया यस्तो हुन्छ किनकि निश्चित हार्मोनहरू सक्रिय हुन्छन् जस्तो यो हुन्छ जब तपाईले मेक-अप सेक्स गर्नु हुन्छ जुन लडाई पछि क्रूर हुन्छ।
यी सबै चीजहरू दिमागमा रासायनिक प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ जसले प्रेमीहरूलाई उनीहरूको हराएको जस्तो लाग्ने चीज पुनः प्राप्त गरेर बढी उत्तेजित महसुस गर्दछ। तपाईंको भूतपूर्वको साथ फिर्ता पाउने फाइदाहरू मध्ये एक यो हो कि तपाईं उस्तै गल्तीहरू गर्न जाँदै हुनुहुन्न।
अघिल्लो पार्टनरमा फर्किनु परिपक्व व्यवहार हो, यो संकेत गर्दै कि तपाईं स्थिरतातिर कदम चाल्न तयार हुन सक्नुहुन्छ। यदि अन्तिम ब्रेकको कारण स्पष्ट छ भने, तिनीहरूले पक्कै पनि उही गल्ती फेरि गर्दैनन् र सम्बन्ध बढी पारदर्शी र सामंजस्यपूर्ण हुनेछ। "जो इतिहास बुझ्दैनन् उही उस्तै गल्तीहरू दोहोर्याउँदछ" यो वाक्यांश प्रेमको क्षेत्रमा एक नयाँ अर्थ छ। अवश्य पनि, यस पटक तपाईंको आफ्नै कहानी खुशी हुन सक्छ, प्रेम र यौनले पूर्ण, कुनै विवाद बिना, तिनीहरूलाई फेरि अन्त्य गर्न र फेरि एक अर्कालाई सम्झना गर्न को कारण।
यदि तपाइँ अलग्गिए पछि केहि साथीहरूसँग बस्न असहज महसुस गर्नुहुन्छ भने, परिस्थितिमा सुधार हुनेछ र विगतका साथीहरूको समान समूह पुनर्मिलन हुनेछ। हो, तपाईंले नयाँ पार्टनरहरूमा आफ्ना अभिभावक र साथीहरूलाई पुन: प्रस्तुत गर्नुपर्दैन।
तपाईंको भूतपूर्वको साथ फिर्ता हुने फाइदाहरू
जसरी तपाईले धेरै सुविधाहरू पाउन सक्नुहुन्छ जस्तो कि हामीले उल्लेख गरेका छौं, त्यहाँ केही बेफाइदाहरू पनि हुन सक्छन्। वैज्ञानिकहरूले पनि यस दृष्टिकोणलाई अन्य परिप्रेक्ष्यमा अध्ययन गरेका छन्। निर्भरता प्रतिक्रिया डोपामाइन र अक्सीटोसिनको मिश्रणको कारणले हुन्छ। यो एक तंत्रिका कारण हो जुन एक व्यक्तिसँग विगतबाट सम्बन्धमा फर्कनेसँग सम्बन्धित छ। तपाईंको भूतपूर्वको साथ फिर्ता पाउनु भनेको तपाईं यी प्रकारका पदार्थहरूमा निर्भर हुन सक्नुहुन्छ र एउटा चक्र उत्पन्न हुन्छ।
यो पनि हुन सक्छ कि अनुभव उस्तै छैन। कहिलेकाँही जब एक जोडी एक ब्रेकअप पछि फर्कन्छ, यो पुरानो सम्झना वा कहानी सँगै हुन सक्छ कि तिनीहरू एकसाथ बस्थे तर त्यो केस होईन। यसैले धेरै जोडीहरू फेरि जारी राख्न कोसिस गर्छन्। समस्या यो हो कि यो प्रवृत्तिले सोच्दछ कि चीजहरू एकदमै अचम्मको थियो उत्पन्न गर्न सकिन्छ अपेक्षाहरूका साथ निराशा जुन पूरा गर्न काम गर्दैन। र यो यो हो कि दुबैको अन्य रुचिहरू हुन सक्छन्, कि तिनीहरूले आफ्नो जीवनको दर्शन दर्शन परिवर्तन गरेका छन् वा कि उनीहरूले हामीलाई पहिले जस्तै उनीहरूले पहिलेझैं बुझेका थिए। यो फेरि कम तल्लो गुणको सम्बन्धमा उमाल्छ।
तपाईंले कसैलाई भेट्ने सम्भावनालाई चिन्ह लगाउनु पर्छ। र यो यो हो कि यदि तपाइँ तपाइँको भूतपूर्वको साथ फिर्ता जानुभयो भने तपाइँ अरू कसैलाई भेट्ने सम्भावना गुमाउनुहुन्छ। सम्बन्ध दोहोर्‍याउने तथ्यले तपाइँ नयाँ कुरा जान्न र तपाइँका विकल्पहरूलाई सीमित गर्न ढोका बन्द गर्दै हुनुहुन्छ भनेर संकेत गर्दछ। कहिलेकाँही कम्फर्ट क्षेत्रबाट बाहिर निस्कन गाह्रो हुन्छ, तर धेरै मानिसहरू उस्तै सम्बन्धबाट फर्कन्छन् तिनीहरू असुरक्षित छन् र उनीहरूसँग पहिले नै बिमा गरिएको छ.
एउटा ठूलो कमजोरी, यो नराम्रो अन्त्य गर्न सक्छ। यदि तपाईं आफ्नो भूतपूर्वको साथ फिर्ता पाउन चाहनुहुन्छ भने, यो किनभने तिनीहरू दुश्मन बन्न समाप्त भएनन्। जे होस्, फेरि एक जोडी बन्न जब, कहानी अन्त मा यति सुन्दर नहुन सक्छ। तिनीहरू एक अर्कालाई घृणा गर्न आउँछन्। चीजहरू धेरै नराम्ररी अन्त्य हुने सम्भावना एक ठूलो विरोधाभास मध्येको हो जुन पूर्वको साथ फर्कनु पर्छ।
तपाईंको भूतपूर्वको साथ फिर्ता जान सजिलो छ वा छैन भन्ने विज्ञानद्वारा गरिएको अध्ययनले संकेत गर्दछ कि पूर्व पार्टनरप्रतिको साँचो प्रेम महसुस गर्न र सम्भव भएको रोमान्स फेरि सुरु गर्न यो सम्भव छ। दिमागमा राख्नुहोस् कि विज्ञानले दाबी गर्छ कि लामो समय एक मायालु जोडी6महिना को अवधि को लागी अलग गर्नु पर्छ।
तथ्या .्कले देखाउँदछ कि सम्बन्धको एक तिहाई भन्दा बढी समाप्त हुन्छ कुनै समयमा दोस्रो मौका दिईन्छ। सामान्यतया यो भनिन्छ कि चीजहरू दोस्रो पटक वरिपरि फरक हुन गइरहेका छन् र विगतका सबै गल्तीहरूलाई सुधार र सुधार गर्न कोशिस गरिन्छ। आशावादले सम्बन्ध र आलस्यमा लगेको समयसँगै अर्को नयाँ पार्टनर फेला पार्नुपर्दछ। ती ज्ञात भावनात्मक संसाधनहरूको प्रकोपमा पनि सुरक्षित छन्।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, तपाईले जोडीहरूको ब्रेकअपको अन्त्य र सुरुको बारेमा सावधानीपूर्वक विश्लेषण गर्नुपर्दछ कि यदि यो तपाइँको भूतपूर्वको साथ फिर्ता जान सल्लाह दिन सकिन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: स्टाइलिश पुरुषहरू » फिट » जोडी र सेक्स » तपाईंको भूतपूर्वको साथ फिर्ता जानुहोस्
फ्याट गुमाउन उत्तम सल्लाहहरू